प्राकृतिक जोम्बीहरु – Anotherverse
साइन्स फिक्सनमा धेरै सुनिएको, देखिएको “जोम्बी”। जोम्बी शब्द हाइटीको लोक कथा बाट आएको शब्द हो, जसको अर्थ एउटा मरीसकेको लाशको पुनर्जन्म हो जुन बिभिन्न जादु वा टुना मुनाले गरिन्छ। अाजकल जोम्बीलाई भाईरस इन्फेक्सन बाट हुन सक्ने भन्दै धेरै साइन्स फिक्सन तथा हरर चलचित्रमा देखाइने गरिएको छ! जोम्बी हुनु कुनै मानवको मृत शरीरमा सम्भव हुने कुरा शायद नै हैन, र भाईरसका कारण हुने नै रहेछ भनेपनि कुनै दिन भएछ भने मात्र प्रमाणित होला! तर जनावरहरु मा “जोम्बी” शब्द को प्रयोग भएको छ, मृत शरीरको पुनर्जीवन नभइ, एउटा जिवित शरीरमा जोम्बी झै प्रवृत्ति ल्याउने प्रक्रिया जनावरहरुमा देखिन्छ।
सानो छँदा कुमालकोटी (Emerald Cockroach Wasp or Jewel Wasp (Ampulex compressa) ,देख्यो कि घरमा यस्ले साङ्लोलाई कुमालकोटी बनाउँछ भन्ने हुन्थ्यो। अचम्म लाग्थ्यो सोचेर, तर त्यो बेला अन्धविश्वास वा चमत्कारमा नि विश्वास लाग्ने भएर होला नि त भनेर टारिन्थ्यो। तर अहिले आएर साङ्लो र कुमालकोटी यथार्थ बारे बुझियो! सोच्थेँ कसरी साङ्लो कुमालकोटी हुन्छ।
कुमालकोटीले साङ्लोलाई पखेटामा टोकेर त्यसलाई हल्लिन नसक्ने बनाउछ र फेरी शरीरमा टोकेर एक प्रकारको विष उसको शरीर भित्र छोडिदिन्छ जस्ले गर्दा त्यो साङलो केही बेर सम्म चल्न नसक्ने हुन्छ र केही मिनेट पछि त्यो फेरी चल्न सक्ने हुन्छ, त्यो बेला भाग्न सक्ने हुँदा हुँदै पनि भाग्दैन, किनकि कुमालकोटीले उस्को मस्तिष्कमा असर गर्ने गरी विष फालेको हुन्छ! उस्ले विष मात्र नछोडेर त्यो साङ्लो भित्र अन्डा पनि पारेको हुन्छ! त्यस पछि कुमालकोटीले आफुले एउटा सानो खाल्डो खन्छ र साङ्लोको “एन्टिना” मा टोकेर उस्लाई तानेर लगेर त्यो खाल्डोमा राखिदिन्छ! अनि केही महिनापछि त्यो साङ्लो भित्रबाट कुमालकोटीहरु निस्किन्छन! यही प्रकृया देखेर नै पहिले देखिनै कुमालकोटीले सङ्लोलाई कुमालकोटी बनाउछ भन्ने कथन आएको हुनु पर्छ!
यस्तै अर्को एउटा धेरै नै रोचक “जोम्बी” कमिला पनि देख्न पाईन्छ। थाइल्यान्ड र ब्राजिलको जङ्गलमा एक प्रकारको फङ्गस (Ophiocordyceps unilateralis) (च्याउ जस्तै प्रजाति) पाईन्छ जस्को स्पोर्सले कमिला(Camponotus leonardi, the carpenter ant) लाई एक प्रकारको जोम्बी बनाइदिन्छ। त्यो स्पोर्सले कमिलालाई लठ्याइदिन्छ र आफु हिँडिरहेको बाटो छोडेर रुखतिर चढ्न बाध्य बनाइदिन्छ। यस्तो व्यवहार देखाउन लागेको कमिलालाई अरु ठिक हालतका कमिलाले तानेर अरु कमिलालाई असर नगरोस भनेर टाढा लग्ने गरेको पाईन्छ। त्यो लठ्ठिएको कमिला जब कुनै रुखको हाँगामा गएर बस्छ, बिस्तारै त्यो कमिलाबाट त्यो फङ्गसको असर निस्किन थाल्छ। यहाँ त्यो फङ्गसले आफ्नो जाति विस्तारको (reproduction) माध्यम एउटा कमिलालाई बनाउछ र जब त्यो कमिला बाट फङ्गस निस्किन्छ त्यस पछि त्यही फङ्गसले फेरी आफ्नो जीवनचक्र (life cycle) पुरा गर्नमा लाग्छ।
चल्चित्रमा देखाइएकै जस्तै जोम्बी नभए पनि त्यस्तै देखिने घटनाहरु धेरै पाउन सकिन्छ प्रकृतिमा!